Warbixin: Alshabab oo weerarkii ugu Qaraxyada badnaa ku qaaday Muqdisho & Maleeshiyo toogasho lagu dilay - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Warbixin: Alshabab oo weerarkii ugu Qaraxyada badnaa ku qaaday Muqdisho & Maleeshiyo toogasho lagu dilay
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay, 40 kalena waa ku dhaawacmeen saddex qarax oo kooxda Alshabaab ku qaaday Galabta Hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho.
Weerarrada oo loo adeegsaday Gawaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo maleeshiyo hubeysan ayaa waxaa ku dhintay dad shacab oo u badan kuwii xilligaasi mareyay Wadadda KM4, siiba Gaari nooca BL-ka ah oo qaraxu ku qabsaday Hotelka hortiisa.
Hay’adaha Amniga Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay toodasho ku dileen shan ka tirsan maleeshiyada Alshabaab isku dayday inay gudaha u dagaal Hotelka si ay uga dhex dagaalamaan.
Afhayeenka Ciidanka booliska Qaasim Axmed Rooble ayaa sheegay in maleeshiyaadka ka tirsanaa Al-Shabaab oo qaraxyada kaddib isku dayey inay gudaha u galaan Hotel Saxafi ay toogasho ku dileen ciidamada amniga, waxayna gaarayeen lix maleeshiyo.
Muuqallada maleeshiyada Alshabaab ayaa la soo bandhigay, waxayna hay’adaha amniga baajiyeen in maleeshiyada ay gudaha u galaan Hotelka, inkastoo ay ka hortegi waayeen qaraxyo gaaraya saddex oo Alshabaab ay soo abaabuleen
Muqdisho Qarax Top
Soomaaliya oo xaalad degdeg ah looga dhawaaqay